Madaxweyne Erdogan oo 16 sano ku fadhiyey kursiga oo weli deyn lagu leeyahay… – Hagaag.com
Madaxweyne Erdogan oo 16 sano ku fadhiyey kursiga oo weli deyn lagu leeyahay…
Bandhigida hantida Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa weli la hadal hayaa wadamada Carabta, waxayna isu barbardhigeen xaaladaha ay ku sugan yihiin wadamadooda oo aafeeyey musuqmaasuqa iyo hanti ku yeelashada mas’uuliyada.
Wargeyska rasmiga ah ee Turkiga ayaa daabacay waxa uu ku sheegay in uu kashifay hantida Madaxweyne Erdogan, isaga oo sheegay in uu haysto 6 Milyan iyo 347 kun oo lacagta liirada Turkida oo ah (qiyaastii 1.37 Milyan Dollar) oo kala yaalaan seddax bangi.
Sida ku cad warbixinta wargeyska rasmiga ah, Madaxweyne Erdogan ayaa ku leh dhul gobolka uu ka soo jeedo oo qiimihiisu yahay 10 kun lirada turkida (qiyaastii 2,160 doolar) iyo guri uu ku leeyahay magaalada Oscodar ee Istanbul qiimihiisu dhan yahay 4 million Lira (qiyaastii 868 kun oo doolar).
Wargeysku wuxuu intaa ku daray in Erdogan uu leeyahay gaari Audi “A8”, oo qiimihiisu yahay 234 kun oo lira (qiyaas ahaan 50 kun oo doolar).
Laakiin warka ugu weyn ee wargeyska Turkiga uu qarxiyey oo yaabka leh ayaa ah in Ganacsade Maxamed Gore uu deyn ku leeyahay Madaxweyne Erdogan oo gaareysa laba milyan oo lira oo u dhiganta ($ 434,000).
Baraha bulshada ee dalalka Carabta ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay soo bandhigida hantida Madaxweynaha Turkiga asaga oo xukunka ku fadhiyey 16 sanadood, qaar ayaa sheegay in madaxdooda ay hanti ku yeeshaan sanadka ugu horeeya iskaba dhaafe 16 sano, taasi waxay ku tusineysaa Allah ka cabsiga Madaxweyne Erdogan.